Juventus Oo Heshiis U Soo Bandhigtay Xidiga Paul Pogba
HomeWararka CiyaarahaJuventus oo heshiis u soo bandhigtay Xidiga Paul Pogba
March 9, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay u soo bandhigtay Paul Pogba qandaraas ku kacaya €9m (£7.5m) xilli ciyaareedkii iyo lacago gunno ah si ay beeca xorta ah ugu soo laabtaan kooxda reer Talyaani xagaagan.
Qandaraaska xiddiga heerka caalami ee dalka France ee Manchester United ayaa ku eg dhamaadka bisha June, uma badna inuu u saxiixo heshiis kordhin kooxda ah.
Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa si xoogan loola xiriirinayay xiddiga ku guulaysta koobka adduunka laakiin Juventus ayaa u muuqata in ay noqotay kooxda ugu cad cad ee dib ula soo saxiixan doonta xiddigeedii hore.
Sida laga soo xigtay saxafiga reer Talyaani ee Rudy Galetti , Old Lady ayaa u soo bandhigtay ku guulaysta koobka adduunka heshiis ku kacaya €9m (£7.5m) xilli ciyaareedkii iyo gunno dhan €3m (£2.5m).
28-sano jirkaan ayaa horay u matalay kooxda reer Talyaani intii u dhaxeysay 2012 iyo 2016, isagoo kula guuleystay afar horyaal oo Seri A ah iyo labo Coppa Italia ka hor inta uusan ku laaban Man United.